तपाई हाम्रो प्रतिबद्धता – भष्ट्रचारीको हुर्मत - Gokarna News
तपाई हाम्रो प्रतिबद्धता – भष्ट्रचारीको हुर्मत
आइतबार, असोज १४, २०७५ by गोकर्ण न्युज
लेखक – रातो मसी
गत अंकमा धोबी खोला किनारका जग्गाहरुबाट करोड पति बनेका मानिसहरुका बारेमा मैले लेखेको थिए । तर मसि ओभाउन नपाउँदै त्यहि करोड पति बन्ने र बनाउने मध्ये कै मालपोत कार्यालय चाबहिलका हाकिम , कर्मचारी र भू माफियाको मिलेमत्तोमा बुढानिलकण्ठ नगरपालिका निवासी श्री चन्द्रकृष्ण कायस्थको ४० आना जग्गा रु ६ करोडमा बिक्रि गरेर खाएको कुरा मिडिया र सामाजिक संजालमा भाइरल भएको छ । केहि कर्मचारी र भू – माफियाहरुलाई प्रहरीले समाएको भन्ने सम्म सुन्नमा आएको छ । हाकिम फरार छन् रे ! यहाँ पनि भुर्रा माछा मात्र पर्ने र ठुला माछा उम्कने प्राय निश्चित छ ।
यहाँ एउटाले भष्ट्राचार गर्छ , फेरी त्यो भष्ट्रचारीलाई जोगाउन अर्को भष्ट्रचार हुन्छ । आयल निगमका चुडा मणि र एनसेल प्रकरणमा हेर्नुहोस् त्यहाँ पनि त्यही भयो । डिगम्वर झालाई सरकारले दुधले नुहाएर सेवामा फर्काया े। निलम्बित प्रहरीले पनि पदवी पाए । हामी बुद्धिजिवी , नागरिक समाज , मानव अधिकार वादी , पार्टी र नेताहरुको भाषा बोल्ने भिजिलन्ते भयाँै । हामी तमासा हेरेर मात्र बसिरहेका छौँ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा हेर्नुहोस् । ठुला ठुला माछा उम्कने क्रम जारी छ । कञ्चनपुर कि वालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको हत्या केशमा आज दुई महिना बिति सक्दा पनि वलात्कारी र हत्याराहरु पत्ता लागेको छैन । सरकार नाटक मन्चन गरेको गरै छ , प्रहरी प्रशासन निर्दोष जनताको छातीलाई गोलीको निशाना बनाएर नपुगी ढाड पनि सेक्दै छ । हिजो गरीब , निमुखा जनता हरुले के सोचेका थिए । यो सरकार आज कसको इशारामा नाच्दै छ । सरकारका मन्त्री सिंहदरबारमा आफन्तहरुको लर्को लगाएर हिडिरहेका छन् । जनता सिटामोल खान नपाएर मर्न वाध्य छन् ।
मन्त्री , नेताहरुको टाउको दुख्न हुदैन , सिंगापुर बैंकक धाउछन् । महंगीले सिमाना नाघेको छ ।
गरीब जनतालाई बिहान बेलुका छाक टार्नु गाह्रो छ । सडकको अवस्था हेर्नुहोस बेहाल छ । मन्त्रीहरु १ बर्ष भित्र मा माक्स लाउनु पर्दैन भन्दै हिड्छन , पानी जहाज र रेलको कुरा गर्छन । फोहोरले सडकमा हिड्नु हुँदैन । बागमती सरसफाई यति सप्ता र उति हप्ता भयो भन्दै हिड्छन् । नदि र खोलामा नगरपालिका , उप महानगरपालिका र महा नगरपालिका मिसाउन छोड्दैन । यहाँ देशलाई बेहाल बनाउने , को कसको नियत के छ भन्ने कुरा तपाई हामीलाई बुझ्नै गाह्रो छ । यो सरकार बन्द मुलुकको सफलताको कथा लेख्न पाइने आशामा मेरो मन निकै उत्सुकतामा थियो । तर आज बिडम्बना भनाँै यस्तै यस्तै जनताका बेथा र राष्ट्र दुखेको कुरा लेख्न बाध्य छ । प्रसंश भष्ट्राचार , अनियमिता , ढिला ,सुस्ती ,नाताबाद कृपाबाद , भनसुन कै कुरा गरौ । जसले सिंगो मुलुकलाई वर्वाद पारेको छ । मुलुक विकास र समृद्धि लाई अवरोध गरेको छ । यसका कारण को हुन् किन तिनीहरु मुलुकमा यति ठुलो राजनैतिक परिवर्तन हुँदा पनि परिवर्तन हुन चाहदैनन् , यसका पछाडी के कारण छ । हरेक राष्ट्र प्रेमी दाजु भाइ दिदी बहिनीहरुले बेलैमा सोच्नु पर्ने बेला छ ।
छातीमा हात राखेर सत्य कुरा बोल्नु पर्छ – राज्य प्रशासन व्यवस्थामा अपनाइएको अतिवादी र सामन्ती राज्य प्रशासन नीति र त्यसले विकास गरेको मनोपोली कर्मचारीतन्त्र , नाममा प्रगतिशील गतिशील क्रान्तिकारी भनिए पनि राजनैतिक नेतृत्वमा देखिएको बर्जुवा कार्यशैली नै मुख्य कारण हुन्, जुन अहिले देखिदै आएको कुरा हो ।
राजनिति हिजो भन्दा आज पैसा कमाउने व्यापार र उद्योगमा रुपान्तरित हुदैछ । त्यसका नाइके र खलनाइकेको आचरण र प्रवृतिमा कुनै सुधार आउने छाँटकाट छैन । तर राज्य संरचनाको जिम्मा पाएकाहरुले केहि गरेनन् भन्दैमा तपाई हामी जस्ता राष्ट्र र जनतालाई माया गर्ने राष्ट्र प्रेमीहरु चुप लगेर बस्न सक्दैनाँै । त्यसो भए अब के गर्ने त ? क्रान्तिको उत्घोष गर्ने ? बम बन्दुक पड्काउने ? सडक हड्ताल गर्ने ? त्यसो होइन , भष्ट्रचारीहरुलाई तह लगाउने केहि सरल र घरेलु उपायहरु छन् । त्यसका लागि तपाई हाम्रो एउटा अठोट चाहिन्छ , तपाई हामीले प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । भष्ट्रचारी , कालो बजारी , भू – माफिया , बिचौलिया , घुसखोर , नाताबाद , कृपाबाद र भनसुन हाम्रो शत्रुहरु हुन्, तपाई हामी प्रतिवद्ध र एक भएर लाग्यौं भने यस्ता समाजका कलंकलाई समाज र राष्ट्रबाट तपाई हामीले जरै बाट उखेलेर फाल्न सक्छौ ं।
त्यसका लागि आज बाट प्राण गरौँ । भष्ट्रचारीलाई तह लगाउने घरेलु उपायहरुको बारेमा तपाई पाठकहरुमा निबेदन गर्न चाहन्छु ।
सर्बप्रथम तपाई हामी मिलेर देश व्यापीरुपमा एउटा शसक्त र मजबुत संगठन बनाआ ैं। जसको सदस्यता – सामाजिक संजालबाट पनि निर्माण गर्न सकियोस् यस बिषयमा छुट्टै आगामी कुनै अंशमा छलफल चलाउन सकिन्छ ।
भष्ट्रचारीहरुसंग उड्बस गर्दै नगर्नुहोस । तिनीहरु भष्ट्रचारी र घुस खोरी हुन् भन्ने कुरा छरछिमेक, टोल , सार्वजनिक ठाउँहरुमा व्यापक प्रचार प्रसार गर्नु होस् ।
तिनीहरुले बोलाएको सर्बजनिक भेला , समारोह , भोज भत्तेरमा जाँदै नजानुहोस् ।
तिनीहरुले छोए , चलाएको नखानुहोस् ।
तिनीहरुको परिवारसंग नाता कुटुम्बेली जोड्दै नजोड्नु होस् ।
तिनीहरुलाई सार्वजनिक भेला , समारोह , भत्तेर , सार्वजनिक कामहरुमा बोलाउँदै नाबोलाउनु होस् ।
सार्बजनिक खरिद बिक्रीमा समेत बन्देज लगाउनुहोस्
. तिनीहरु दिने जुन सुकै सार्बजनिक सेवालाई इन्कार गरिदिनु होस्
बाटो घाटो सार्बजनिक ठाउमा भेट्नु भयो भने घृणा भावले हेर्नुहोस्
तिनीहरुले बोलाएको कुरालाई वास्तै नगर्नुहोस , अस्विकार गर्नुहोस , प्रतिकार गर्नुहोस
भष्ट्राचारको बिषयमा पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहोस
एकता वद्ध र संगठित हुनुहोस , भाष्ट्रचारीले तपाईलाई आर्थिक प्रलोभन, डर , त्रास, धम्कि दिन सक्छ , तपाई बिचलित नहुनुहोस । त्यस्ता कुराहरुको तुरुन्तै प्रतिबाद गर्नुहोस , तुरुन्तै साथी भाइ छरछिमेक , मिडिया , सामाजिक संजालमा प्रचार प्रसार गर्नुहोस
जहाँ भष्ट्रचारी हरु बस्दछन ती एरिया , ठाउँ हरुमा हप्तामा कम्तिमा एकपटक सडक नाटक , पर्चा , पम्पेलेट , कोण सभा गरेर स्थानीय जनतालाई एकजुट पार्न र जनतालाई सचेत पार्न सक्नुहुन्छ।
तपाई कार्यालयमा सेवा ग्रही भएर जाँदा घुस दिंदै नदिनु होस्। कसैले घुस माग्दछ भने अख्तियार का कर्मचारी लाई फोन १०७ मा खबर गर्नुहोस। अख्तियार का कर्मचारीले चासो नदिएमा तत्काल स्थानीय मानिस हरु जम्मा भेला गरेर जनमत सृजना गरी प्रतिकार गर्नुहोस। यसो गर्दा भष्ट्राचार बिरोधी संगठन बनेको छ भन्ने संगठन मार्फत काम गर्नुहोस्। संधै सकारात्मक सोच राख्नुहोस। परिबर्तन सम्भब छ , तपाई हाम्रै पालामा आज भोलि नै भष्ट्राचार लाई समाज र राष्ट्र बाट जरै बाट उखेलेर फाल्न सक्छौं। भष्ट्राचारको निमुलिकरण राष्ट्र को विकास र समृद्धि को आधार , तपाई हाम्रो एकता र प्रतिवद्धता